စကွင်းကဲလား? အလှကုန်ပစ္စည်းလား? ဘယ်ဟာက ပိုခေတ်စားနေတယ်လို့ထင်လဲ??? – For her myanmar
Posted on May 2, 2019 May 2, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
သိထားသင့်ပါတယ်… အလှအပချစ်သူမှန်ရင်ပေါ့ :3
အလှအပရေစီးကြောင်းဆိုတာ တစ်နှစ်အတွင်းမှာတောင် နှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြောင်းချင်ပြောင်းတတ်တဲ့ အမျိုးမလား? နှင်းလေ့လာမိသလောက်တော့ ၉၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်မှာ မျက်ခုံးတစ်ချောင်းတည်း၊ လိုင်နာအနက်ခပ်ထူထူ၊ ခပ်ရဲရဲနှုတ်ခမ်းနီနဲ့ ခပ်ဖြူဖြူမျက်နှာတွေကခေတ်စားခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်နားရောက်လာတော့ ပင်ကိုယ် (Natural) အလှပုံစံ (အရောင်တွေသိပ်မရှိတဲ့ပုံစံ) ကခေတ်စားလာတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ၁၇ နှစ်အကြာ ၂၀၁၇ နားမှာတော့ အလှကုန်ပစ္စည်းထက် တကယ့်ပင်ကိုယ်အလှက ပိုပြီးခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။
တကယ့်ပင်ကိုယ်အလှဆိုတဲ့အတိုင်း မျက်နှာမှာမိတ်ကပ်ကမရှိသလောက် နည်းပါးတာကြောင့် ပင်ကိုယ်အသားအရေက တကယ်ကောင်းနေမှ မိတ်ကပ်မလိမ်းလည်း လှတပတလေးထွက်မှာကိုး။ ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ပင်ကိုယ်အသားအရေကောင်းဖို့အတွက် ဦးစားပေးပြီး စကွင်းကဲကို အသားကုန်ဦးစားပေး လုပ်လာကြပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ တိုနာ၊ နို့ရည်လောက်ရှိရင်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့စကွင်းကဲကမ္ဘာကြီးက ပြည့်စုံလှပနေပြီလို့ ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ၂၀၁၈ နောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတဲ့ ဖန်သားပြင်နဲ့ တူတဲ့ထိ ချောမွတ်ပြောင်လက်နေတဲ့ အသားအရေ(Glass Skin) လို ကြည်လင်ဝင်းမွတ်ပြီး ကြည့်တဲ့သူတိုင်း မျက်စိကျိန်းရလောက်အောင် ဂလိုးနေမှုတွေ ရလာအောင်ကျတော့ တိုနာ၊ နို့ရည်လောက်နဲ့ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ Essence, Serum, Night Cream စတဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ယောင်းတို့ရဲ့အသားအရေအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကိုပါပြန်ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်းပစ္စည်းတွေကိုပါ ထပ်တိုးပြီး သုံးလာကြပါတယ်။
Related Article >>> ပုံမှန်ထက် ရင်သားသေးတဲ့ယောင်းတွေ အထာကျကျလန်းနိုင်မယ့် ဖက်ရှင် (၅) မျိုး
၂၀၁၉မှာတော့ Genetic Based Skincare လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စကွင်းကဲတွေက အရမ်းခေတ်စားလာပါတယ်။ ဥပမာအနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ကိုယ့်သွေးကိုယ်ဖောက်ပြီး မျက်နှာပေါ် Mask အနေနဲ့ ကပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ နောက်ပြီးဒီလို ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ စကွင်းကဲတွေက Anti-Aging လို့ခေါ်တဲ့ အရွယ်တင်နုပျိုစေမယ့် ဓာတ်ပစ္စည်းကိုလည်း အပြည့်ဝဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ (တချို့တွေဆို အမျိုးသားရဲ့သုတ်ပိုးတွေကို မျက်နှာလိမ်းတယ်ဆိုလား… အာ့မျိုးတွေပေါ့ :3 )
နောက်ပြီး သုံးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း ရလဒ်တစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့ Intensive Active Skincare တွေကလည်း ဒီနှစ်မှာအရမ်းခေတ်စားလာပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… ဥပမာ Mask တွေ Overnight capsule (တစ်ညတည်းနဲ့ချက်ချင်းသိသာစေတဲ့ ဆေးလုံးလေးတွေ), Overnight Sleeping Pack (or) Mask (တစ်ညတည်းနဲ့သိသာစေမယ့် ညအိပ်ချိန်လိမ်းပြီးမနက်မှာ ရေဆေးချရတဲ့စကင်းကဲ တစ်မျိုး) တွေကတော့ ဒီနှစ်မှာ ခေတ်အစားဆုံး အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုမျိုး မျက်လုံးကျိန်းနေလောက်အောင် ဂလိုးနေဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်တာမို့ အရေကြီးတဲ့ပွဲ ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စတစ်ခုခုရှိမှ ဒီလို overnight ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ချက်ချင်းဝင်းသွားအောင် လုပ်ကြတာများပါတယ်။
Related Article >>> ချင်းကို သုံးပြီး ဆံပင်သန်အောင် လုပ်ကြမယ်…
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခေတ်စားလာတာကတော့ တကယ့်သဘာဝပစ္စည်းကိုမှ အော်ဂဲနစ်လို့ခေါ်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုပဲ (သဘာဝမြေသြဇာတွေကိုပဲ သီးသန့်အသုံးပြုပြီး သဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့) သီးသန့်သုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စကွင်းကဲပစ္စည်းတွေက အရမ်းကိုခေတ်စားလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသားအရေတစ်မျိုးတည်းတင်မကဘဲ စိတ်ကိုလည်းကြည်လင်ပြီးလန်းဆန်းစေမယ့် အနံ့မျိုးပါရှိတဲ့ ဟင်းနုနွယ်အပင်၊ ရှားစောင်းလက်ပက်အပင်နဲ့ တခြားရှားပါးပန်းပွင့်၊ အသီးနဲ့ အပင်တွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲမှုနှုန်းက သိသိသသာသာကြီးတိုးတက်လာပါတယ်တဲ့။
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဆောင်းပါးထဲမှာပဲ အဖြေကသိသိသာသာကြီး ထွက်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့နော်။ ၂၀၁၇ လောက်ကနေစပြီး တစ်ခဏအလှထက် ဘယ်အချိန်မှာမဆိုလှနေစေမယ့် သဘာဝအလှကို ပိုတန်ဖိုးထား မြတ်နိုးလာတာကြောင့် စကွင်းကဲတွေကို သိသိသာသာပိုသုံးလာပြီး ပိုခေတ်စားလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယောင်းတို့လည်း နှုတ်ခမ်းနီ၊ ရှဲဒိုးတွေကို အရောင်လှတိုင်းဝယ်စုနေတာလေးကိုလျှော့ပြီး ကိုယ့်အသားအရေလေးကို ပိုကောင်းစေမယ့် စကွင်းကဲလေးတွေ ဝယ်စုပါတော့လို့။ အဓိကက ရေများများသောက်ပြီး ဝမ်းမချုပ်ဘူး၊ အသီးအရွက်များများစားမယ်ဆိုရင်တောင် အသားအရေက တော်တော်လေးကြည်လာပါလိမ့်မယ်နော်။
လှပြီးသားယောင်းလေးတွေကို ပိုပိုပြီး လှစေချင်တဲ့…
သိထားသငျ့ပါတယျ… အလှအပခဈြသူမှနျရငျပေါ့ :3
အလှအပရစေီးကွောငျးဆိုတာ တဈနှဈအတှငျးမှာတောငျ နှဈမြိုးသုံးမြိုးပွောငျးခငျြပွောငျးတတျတဲ့ အမြိုးမလား? နှငျးလလေ့ာမိသလောကျတော့ ၉၀ ခုနှဈအစောပိုငျးလောကျမှာ မကျြခုံးတဈခြောငျးတညျး၊ လိုငျနာအနကျခပျထူထူ၊ ခပျရဲရဲနှုတျခမျးနီနဲ့ ခပျဖွူဖွူမကျြနှာတှကေခတျေစားခဲ့ပမေဲ့ ၂၀၀၀ ပတျဝနျးကငျြနားရောကျလာတော့ ပငျကိုယျ (Natural) အလှပုံစံ (အရောငျတှသေိပျမရှိတဲ့ပုံစံ) ကခတျေစားလာတယျလေ။ ဒါပမေဲ့ ၁၇ နှဈအကွာ ၂၀၁၇ နားမှာတော့ အလှကုနျပစ်စညျးထကျ တကယျ့ပငျကိုယျအလှက ပိုပွီးခတျေစားလာခဲ့ပါတယျ။
တကယျ့ပငျကိုယျအလှဆိုတဲ့အတိုငျး မကျြနှာမှာမိတျကပျကမရှိသလောကျ နညျးပါးတာကွောငျ့ ပငျကိုယျအသားအရကေ တကယျကောငျးနမှေ မိတျကပျမလိမျးလညျး လှတပတလေးထှကျမှာကိုး။ ဆိုတော့ နောကျပိုငျးမှာ ပငျကိုယျအသားအရကေောငျးဖို့အတှကျ ဦးစားပေးပွီး စကှငျးကဲကို အသားကုနျဦးစားပေး လုပျလာကွပါတယျ။
အရငျတုနျးကတော့ တိုနာ၊ နို့ရညျလောကျရှိရငျပဲ ကိုယျ့ရဲ့စကှငျးကဲကမ်ဘာကွီးက ပွညျ့စုံလှပနပွေီလို့ ထငျခဲ့ပမေဲ့ ၂၀၁၈ နောကျပိုငျးမှာခတျေစားလာတဲ့ ဖနျသားပွငျနဲ့ တူတဲ့ထိ ခြောမှတျပွောငျလကျနတေဲ့ အသားအရေ(Glass Skin) လို ကွညျလငျဝငျးမှတျပွီး ကွညျ့တဲ့သူတိုငျး မကျြစိကြိနျးရလောကျအောငျ ဂလိုးနမှေုတှေ ရလာအောငျကတြော့ တိုနာ၊ နို့ရညျလောကျနဲ့ အဆငျမပွတေော့ပါဘူး။ Essence, Serum, Night Cream စတဲ့ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာတှနေဲ့ ထုတျလုပျထားပွီး ယောငျးတို့ရဲ့အသားအရအေတှငျးပိုငျးမှာရှိတဲ့ ဆဲလျတှကေိုပါပွနျပွုပွငျပေးနိုငျတဲ့ အသားအရေ ထိနျးသိမျးခွငျးပစ်စညျးတှကေိုပါ ထပျတိုးပွီး သုံးလာကွပါတယျ။
Related Article >>> ပုံမှနျထကျ ရငျသားသေးတဲ့ယောငျးတှေ အထာကကြလြနျးနိုငျမယျ့ ဖကျရှငျ (၅) မြိုး
၂၀၁၉မှာတော့ Genetic Based Skincare လို့ချေါတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့မြိုးရိုးဗီဇအပျေါမူတညျပွီး ပွနျထုတျလုပျထားတဲ့ စကှငျးကဲတှကေ အရမျးခတျေစားလာပါတယျ။ ဥပမာအနီးစပျဆုံးပွောရရငျ ကိုယျ့သှေးကိုယျဖောကျပွီး မကျြနှာပျေါ Mask အနနေဲ့ ကပျတဲ့ဟာမြိုးပေါ့။ နောကျပွီးဒီလို ကိုယျ့ရဲ့မြိုးရိုးဗီဇအပျေါမူတညျပွီး ပွနျထုတျထားတဲ့ စကှငျးကဲတှကေ Anti-Aging လို့ချေါတဲ့ အရှယျတငျနုပြိုစမေယျ့ ဓာတျပစ်စညျးကိုလညျး အပွညျ့ဝဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံးထုတျလုပျပေးနိုငျပါတယျတဲ့။ (တခြို့တှဆေို အမြိုးသားရဲ့သုတျပိုးတှကေို မကျြနှာလိမျးတယျဆိုလား… အာ့မြိုးတှပေေါ့ :3 )
နောကျပွီး သုံးပွီးတာနဲ့ခကျြခငျြး ရလဒျတဈခုကိုပေးနိုငျတဲ့ Intensive Active Skincare တှကေလညျး ဒီနှဈမှာအရမျးခတျေစားလာပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… ဥပမာ Mask တှေ Overnight capsule (တဈညတညျးနဲ့ခကျြခငျြးသိသာစတေဲ့ ဆေးလုံးလေးတှေ), Overnight Sleeping Pack (or) Mask (တဈညတညျးနဲ့သိသာစမေယျ့ ညအိပျခြိနျလိမျးပွီးမနကျမှာ ရဆေေးခရြတဲ့စကငျးကဲ တဈမြိုး) တှကေတော့ ဒီနှဈမှာ ခတျေအစားဆုံး အသားအရထေိနျးသိမျးတဲ့ပစ်စညျးတှပေေါ့။ အထူးသဖွငျ့ ဒီလိုမြိုး မကျြလုံးကြိနျးနလေောကျအောငျ ဂလိုးနဖေို့ဆိုတာ အမွဲတမျးမဖွဈနိုငျတာမို့ အရကွေီးတဲ့ပှဲ ဒါမှမဟုတျ ကိစ်စတဈခုခုရှိမှ ဒီလို overnight ပစ်စညျးတှသေုံးပွီး ခကျြခငျြးဝငျးသှားအောငျ လုပျကွတာမြားပါတယျ။
Related Article >>> ခငျြးကို သုံးပွီး ဆံပငျသနျအောငျ လုပျကွမယျ…
နောကျဆုံးအနနေဲ့ ခတျေစားလာတာကတော့ တကယျ့သဘာဝပစ်စညျးကိုမှ အျောဂဲနဈလို့ချေါတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေိုပဲ (သဘာဝမွသွေဇာတှကေိုပဲ သီးသနျ့အသုံးပွုပွီး သဘာဝအတိုငျးစိုကျပြိုးထားတဲ့) သီးသနျ့သုံးပွီး ထုတျလုပျထားတဲ့ စကှငျးကဲပစ်စညျးတှကေ အရမျးကိုခတျေစားလာပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အသားအရတေဈမြိုးတညျးတငျမကဘဲ စိတျကိုလညျးကွညျလငျပွီးလနျးဆနျးစမေယျ့ အနံ့မြိုးပါရှိတဲ့ ဟငျးနုနှယျအပငျ၊ ရှားစောငျးလကျပကျအပငျနဲ့ တခွားရှားပါးပနျးပှငျ့၊ အသီးနဲ့ အပငျတှကေိုအခွခေံပွီးထုတျလုပျထားတဲ့ပစ်စညျးတှကေို သုံးစှဲမှုနှုနျးက သိသိသသာသာကွီးတိုးတကျလာပါတယျတဲ့။
ကဲ ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ဆောငျးပါးထဲမှာပဲ အဖွကေသိသိသာသာကွီး ထှကျလောကျပွီထငျပါရဲ့နျော။ ၂၀၁၇ လောကျကနစေပွီး တဈခဏအလှထကျ ဘယျအခြိနျမှာမဆိုလှနစေမေယျ့ သဘာဝအလှကို ပိုတနျဖိုးထား မွတျနိုးလာတာကွောငျ့ စကှငျးကဲတှကေို သိသိသာသာပိုသုံးလာပွီး ပိုခတျေစားလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ယောငျးတို့လညျး နှုတျခမျးနီ၊ ရှဲဒိုးတှကေို အရောငျလှတိုငျးဝယျစုနတောလေးကိုလြှော့ပွီး ကိုယျ့အသားအရလေေးကို ပိုကောငျးစမေယျ့ စကှငျးကဲလေးတှေ ဝယျစုပါတော့လို့။ အဓိကက ရမြေားမြားသောကျပွီး ဝမျးမခြုပျဘူး၊ အသီးအရှကျမြားမြားစားမယျဆိုရငျတောငျ အသားအရကေ တျောတျောလေးကွညျလာပါလိမျ့မယျနျော။
လှပွီးသားယောငျးလေးတှကေို ပိုပိုပွီး လှစခေငျြတဲ့…
Tagged 2019, Beauty, industry, new, skincare, trend
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ဆယ်လ်ဖီရိုက်တဲ့အခါ နှစ်ယောက်လုံး အလှဆုံးဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ခု
Posted on June 5, 2018 July 25, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်နေရတဲ့ ရန်တွေက ကင်းဝေးစေဖို့…
Gigi Hadid ရဲ့ တစ်နေ့တာ စားသောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း
Posted on September 3, 2018 June 24, 2019 Author Hnin Ei Oo
အလှနတ်မိမယ်ရဲ့ တစ်နေ့စာပလန် ဒီဇိုင်းကာလာဘာညာ အနေအထားဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်….
မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို နှိမ်နင်းကြမယ်
Posted on October 12, 2016 June 25, 2019 Author For Her Myanmar
ဒီအချက် (၇) ချက် ယောင်း သူငယ်ချင်းမှာ ရှိတယ်ဆိုရင် သူက ယောင်းရဲ့ Partner in Crime ပဲ!!!
အောင်ကျော်ချမ်းအေး မန္တလေးကို သွားလည်ခဲ့ရင် ဒါတွေစားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့😋😋